Cilmu-nafsiga midabka iyo barnaamijyadiisa ku aaddan naqshadeynta garaafka iyo xayeysiinta | Abuurista khadka tooska ah
Cilmu-nafsiga midabka iyo barnaamijyadiisa ku aaddan qaabeynta qaabeynta iyo xayeysiinta
Wax kasta oo inagu xeeran midab baa ka buuxa, way nala socdaan, iyagoo og ama aan ahayn na saamayn, tusaale ahaan, xaaladdeena maskaxeed halkaasna waxaa looga yaqaan waxa loo yaqaan cilmi nafsiga midabka, gaar ahaan suuqgeynta xayeysiinta iyo shaqooyinka maqalka ah oo aad waxtar badan u lahaa.
1 Waa maxay cilmu-nafsiga midabku?
2 Midabada iyo isticmaalkooda xayeysiinta
2.8 Lacag iyo dahab
Waa maxay cilmu-nafsiga midabku?
Waxay ku saabsan tahay cilmi u ogolaanaya daraasadaha falanqaynta, sida saameynta, midabada, dabeecadda iyo aragtida aadanaha, iyo sidoo kale shucuurta ka dhalatay aragtiyadan.
Laga soo bilaabo fikraddan, xayeysiiyaasha iyo naqshadeeyayaasha garaafka waxay adeegsadaan waxa midab kastaa astaan ​​u yahay si ay u gaaraan himilooyinkooda meelaynta alaabooyinka ee qaybaha la doonayo iyo inay hubiyaan iibka.
Sidan ayuu midab waliba leeyahay adeegsiga gaarka ah ee xayeysiinta, taas oo ah sababta marka naqshadeynta, midabada si xeeladeysan loogu adeegsado xarfaha iyo dhammaan baakadaha (sanduuqyada, baqshadaha, boorsooyinka, iwm.).
Midabada iyo isticmaalkooda xayeysiinta
Dadweynuhu waxay midabkan ku lammaaneeyaan firfircoonaan, xawaare waana sababta aan had iyo jeer ugu aragno gudaha xayaysiinta goobaha cuntada degdegga ah, kuwaas oo dhagaystayaashoodu u badan yihiin caruur iyo dhalinyaro, marka lagu daro inay sidoo kale joogaan alaabooyin iib ah ama badeecad qiimo jaban halkaas oo fariinta tooska ahi ay tahay iib degdeg ah.
Cilmu-nafsiga midabku wuxuu la xiriiraa garaadka iyo hal-abuurka iyo waliba xanaaqa iyo xaasidnimada, sidaa darteed isticmaalkeedu waa inuu noqdaa mid isku dheellitiran si looga fogaado waxyeellooyinka xun.
Haddii sheyga loogu talagalay qayb dhalinyaro ah, buluug khafiif ah iyo codad dhalaalaya ayaa la isticmaalaa, haddii loogu talo galay dhagaystayaal aad u casri ah oo miyir qaba, buluugyo mugdi iyo mugdi badan ayaa ku habboon.
Midabku wuxuu la xiriiraa dareen qoto dheer, waa miyir qabaa oo wuxuu gudbiyaa xasillooni iyo xasillooni, in kasta oo si xad dhaaf ah loo isticmaalo, saameyntu xoogaa niyad jab ayey yeelan kartaa.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu xayaysiiyo alaabooyin faa iidooyin u leh nolosha qofka, fayoobaanta iyo raaxada, sida qalabka guryaha, cuntooyinka caanaha laga sameeyo, dufanka yar, alaabta carruurta, nadaafadda guriga, iwm. Ujeeddada ayaa ah in la gudbiyo dambi la’aan, xasillooni buuxda, kan saafiga ah, dhammaantiis iyadoo ku xiran sida loo istcimaalo waxay ku siin kartaa saameyn faaruq ah.
Xayeysiinta waxaa looga bartay wax soo saar kasta oo aad rabto inaad ku muujiso raaxo, oo tayo leh, xarrago leh, casri ah oo la adeegsanayo muuqaalka macdanta ee uu bixiyay midabkani oo ku dayanaya qabowga birta. Midabkani wuxuu ka dhashay midowga madow iyo caddaan wuxuuna u taagan yahay isku-dar ah dareenno iyo ficillo is-khilaafsan, tusaale ahaan, farxad la murugo.
Waa midabka ugu habboon ee alaabada suuqoodu bartilmaameedku yahay waayeelka, waxay soo jeedinaysaa tayada iyo qiimaha dhexdhexaadka ah. Waxay la xiriirtaa deggenaanshaha, xilliga dayrta iyo waqtiga la gudbo.
Color heer sare ah oo loo aqoonsaday dhalinyaro, waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiirrigeliyo alaabada iibka iyo dallacsiinta qaarkood. Waxay kuxirantahay waqtiyo diirran, farxad, xamaasad ay tahay in loo isticmaalo saami ahaan.
Isticmaalkeedu waa inuu noqdaa mid si fiican loo daryeelo oo aan xad dhaaf ahayn, laakiin waa ku habboon in lagu matalo qaab, xarrago iyo miyir-qabHaddii sheygu yahay raaxo, kani waa midabka la tilmaamay.
Lacag iyo dahab
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa alaabada raaxada, cadarka, dharka iyo kuwa kale, iyagoo dib u qiimeeya qiimahooda iyo xaaladooda. Hoosyadaas u soo jeedi xoolo si weyn waana taas sababta loogu isticmaalay iyaga oo leh guul weyn.
Dhagaystayaasheeda bartilmaameedku waa kuwo aad u xulasho badan oo dalbanaya markay tahay tayada iyo sumcadda astaanta, badiyaa dadka waaweyn, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa alaabooyinka qaarkood ee carruurta iyo dhallinyarada. Midabka wuxuu la xiriiraa inuu noqdo kaamil, la ruuxiga ah.
Waxaa loo isticmaalaa badeecad kasta oo aad rabto inaad soo jiidato dareenka, dalabyada, dareerayaasha, xaraashka ganacsiga, iwm. midab leh xoog iyo tamar badan Waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin siyaado.
Waa midabka ugu habboon ee loogu talagalay xayeysiiso alaabooyinka la xiriira dabeecadda, leh freshness sida khudradda. Midabku wuxuu la xiriiraa dabeecadda, rajo iyo xasillooni.
Kuwa naga mid ah ee xayeysiinta ku sameeya miisaan yar, waxaa xiiso leh in tan laga fahmo cilmu-nafsiga midabka iyo sida loo adeegsado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Cilmu-nafsiga midabka iyo barnaamijyadiisa ku aaddan qaabeynta qaabeynta iyo xayeysiinta
francisca langaric villanueva dijo
Waxaan jeclahay naqshadeynta garaafka
Ku jawaab francisca langarica villanueva
Sida loo ilaaliyo hantida aqooneed ee internetka
Patreon-crowdfunding, hab lagu kasbado nolol